Thatha ukwazi ukusetyenziswa kweoyile yesilicone
I-Dimethicone ineempawu ezahlukeneyo ezigqwesileyo, ke isetyenziswe ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo emveliso yezolimo kunye nezolimo, ishishini lokhuselo, uphando lwezenzululwazi, ezonyango kunye nezempilo kunye namanye amacandelo. Isetyenziswa ngokubanzi kusambathisa sombane, ukutshabalalisa, ukwenza isidima, ukuthambisa, ...
Uthini umgaqo wokucoca ukufuma kwamalaphu?
Imigaqo yokuLungiswa kokuFuma kweMpahla kunye nokuBila ngokuGqibela Umzimba womntu ngokuqhubekayo ukhupha amanzi kunye nobushushu ngexesha lokuzilolonga nomsebenzi. Ukufunxwa kokufuma nokubila kukudlulisa ubushushu kunye nomphunga emanzini kumphezulu womzimba ngenkqubo ...
Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwendlela yokuthambisa umsonto
Ngokwesiqhelo kwinkqubo yokuluka, unyango lwangaphambi kokunyanga, njl. Lubricant luhlobo lwesithambisi esinokunika iimpahla, kwaye ilaphu liziva lithambile, linxibile kwaye liyasetyenziswa. Iimveliso zemichiza ezithandekayo zemihla ngemihla. Izinto zokuthambisa ...